महेन्द्र क्याम्पसलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्छौ–निमित्त क्याम्पस प्रमुख सुदर्शन रिजाल – जागरण अनलाइन
महेन्द्र क्याम्पसलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्छौ–निमित्त क्याम्पस प्रमुख सुदर्शन रिजाल
२०७५ मंसिर २०, बिहीबार १८:१७ मा प्रकाशित
महे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरका निमित्त क्याम्पस प्रमुख
वि.सं. २०१५ सालमा स् थापना भएको महे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङ साविक राप्ती अञ्चलको उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने सबै भन्दा पुरानो तथा जे ठो शै क्षिक संस् था हो  । कुनै बे ला उच्च शिक्षाका लागि हजारौ ं विद्यार्थीको आकर्षणको के न्द्र रहे को यस शै क्षिक संस् थामा आजभो लि उल्ले ख्य विद्यार्थी भे ट्न पाइदै न । आजभो लिका यस क्षे त्रका सबै जसो राजनीतिक ने तृत्व, जनप्रतिनिधि र सबै जसो कार्यालय तथा संघसंस् थाका जनशक्तिहरु यसै शै क्षिक संस् थाका उत्पादनले ढाके को पाइन्छ । तर त्यही शै क्षिक संस् थाको भौ तिक अवस् था दयनीय छ । तथापि पछिल्लो समय क्याम्पसले सञ्चालनमा ल्याएको बिबिए कार्यक्रम र ५ नंबर प्रदे शस्तरको इञ्जिनियरिङ आंगिक क्याम्पस सञ्चालन हुने संभावनाले यो संस् थाले रुप फे नेर् आशा बढे को छ । जसको ने तृत्व लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहनुभएका पत्रकारसमेत रहनु भएका सुदर्शन रिजालले गरिरहनुभएको छ । क्याम्पसको भौ तिक तथा शै क्षिक अबस्थामा के न्द्रित रहे र जे.एन. सागरले निमित्त क्याम्पस प्रमुख रिजालसग गरे को कुराकानीको सार सक्षे प । –सम्पादक
क्याम्पसको अवस्था अहिले कस्तो छ र कसरी चले को छ ?
यस महे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङमा पूर्णकालीन ४८ र आंशिक ३९ गरी ८७ प्राध्यापक तथा ३० कर्मचारी छौ ं । स् नातक र स् नातको त्तर तहका मानबिकी, शिक्षा, व्यवस्थापन र विज्ञान संकायमा गरी एक हजार पाच सय बढी बिद्यार्थी अध्ययन गरिरहे का छन् । क्याम्पसमा नियमितरुपमा बिहानी तथा दिवा सत्रमा कक्षाहरु सञ्चालन भइरहे का छन् ।
कुनै बे ला एउटै तहमा दुई हजार भन्दा धे रै विद्यार्थी भे टिन्थे । अहिले आकर्षण घट्या हो ?
त्रिभुवन विश्व बिद्यालयलगायत पछिल्ला वर्षहरुमा खुले का धे रै विश्वविद्यालयहरुले राजनीतिक प्रभावमा परे र जथाभावीरुपमा मापदण्डविपरीत स् कूललाई समे त क्याम्पसको सम्बन्धन दिदा एकै जिल्लामा पनि दुई दर्जन बढी क्याम्पस सञ्चालनमा रहे को अवस् था छ । जसको कारणले विद्यार्थी संख्या घटे को अवस् था स्वाभाविक हो । तथापि समयसापे क्ष विषयहरु र नय“–नया कार्यक्रम ल्याउदा बिद्यार्थी आकर्षण घट्दो अवस्थामा हो इन बढ्दो अवस्थामा पनि छ । यो क्याम्पसमा विगतमा मानविकी संकायमा विद्यार्थीको चाप बढी थियो भने आजभो लि व्यवस् थापन, विज्ञान र शिक्षाशास्त्र संकायमा दे खिएको छ । बिद्यार्थीको आकर्षण परिवर्तित समय अनुसारका विषय र नया–नया कार्यक्रम र त्यस शै क्षिक संस्थाको व्यवस्थापनमा भर पर्छ । अहिले विद्यार्थीको चाप कुनै एक शै क्षिक संस्थामा
के न्द्रित भएको नभइ उनीहरुका रो जाइका विषय र कार्यक्रममा धे रै भएकाले आकर्षण धे रै शै क्षिक संस् थामा बाडिएको हो भन्दा हुन्छ ।
आजभो लि उच्च शिक्षा अध्यापन गनेर् एक शै क्षिक संस् थामा एक हजार पाच सय भन्दा बढी बिद्यार्थी हुनु भने को नराम्रो अथवा विद्यार्थी नभएको , आकर्षण घटे को भन्ने अवस्था हो इन । बरु यी विद्यार्थीलाई कसरी राम्रो र गुणस् तरीय शिक्षा दिने भन्ने ठूलो चुनौ तीको कुरा हो  ।
ने तृत्वले पनि गुणस् तर सुधारमा के ही गरे जस् तो दे खिएन नि ?
त्यस् तो हो इन । पुरानो लाई हामी हाम्रो इतिहास, विरासत र अनुभवले भरिएको खारिएको भने र गर्व गछौर् ं । अहिले बजारमा भइरहे को राजनीतिक ने तृत्व, जनप्रतिनिधिहरु र निजी तथा सामाजिक बजारको अधिकांश मानजस्रो तको हिस् सा हाम्रै क्याम्पसको उत्पादन हो  । यो मानवस्रो तका सल्लाह, सुझाव र सहयो गले यो पुरानो संस् थाको व्यवस् थापनमा पनि सुधार ल्याउन खो जिरहे का छौ ं । बिद्यार्थीहरुबाट न्यून शुल्क उठ्नु अनि त्रिबिले भौ तिक सुधारमा खासै बजे ट नदिनु जस् ता कारणले अपे क्षाकृतरुपमा सुधार हुन नसके को भए पनि सुधारका प्रयास शुरु भएका छन्् । यसै शै क्षिक सत्रदे खि व्यवस् थापन संकायको स्नातक तहमा बिबिए कार्यक्रम सञ्चालमा ल्याएका छौ ं । अकोर् वर्षदे खि बिआइएम, बिसिए तथा बिएस् सी सीएसआइटी कुन–कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने र अध्ययन भइरहे को छ । यस क्षे त्रकै राजनीतिक व्यक्तित्व जीवन गौ तमले शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा क्याम्पसमा आगामी शै क्षिक सत्रदे खि इञ्जिनियरिङतर्फ आंगिक क्याम्पस सञ्चालनका लागि पहल गरिरहनुभएको छ भने बिबिए भवन निर्माणका लागि विश्वबिद्यालय अनुदान आयो गबाट दुई करो ड बजे ट बिनियो जन गराउने काममा सहयो ग गर्नुभएको छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महरा र ५ नम्बर प्रदे शका मुख्यमन्त्री शंकर पो ख्रे ललाई भे टे र क्याम्पसको अवस् थाका बारे जानकारी गराउने तथा क्याम्पसमा के कस् ता नया“ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ भने र छलफल गनेर् काम भएको छ । उहाहरुले पनि यस क्याम्पसले ल्याउने यो जनामा सक्दो सहयो ग गनेर् आश्वासन दिनुभएको छ । घो राही उपमहानगरपालिकाका मे यर नरुलाल चौ धरी अहिले पनि यसै क्याम्पसको विद्यार्थीसमे त हुनुहुन्छ । उहा“लगायत नगरपालिका बो र्डलाई क्याम्पसको अवस् थाबारे जानकारी गराएपछि शौ चालय निर्माण र क्यान्टिन मर्मतमा नगरपालिकाले यसै वर्ष १५ लाख रुपै या“ सहयो ग गरे को छ ।
विविएमा बिद्यार्थी आकर्षण छ त ?
महे न्द्र बहुमुखी क्याम्पस त्रिबिको आंगिक र सरकारी क्याम्पस भए पनि यो बिबिए कार्यक्रम निजी कार्यक्रम हो  । अर्थात विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्कले सञ्चालन हुने कार्यक्रम हो  । यसै वर्ष सञ्चालनमा आएको कार्यक्रममा हामी यस वर्ष अपे क्षा गरे भन्दा बढी बिद्यार्थी भर्ना गराउन सफल भएका छौ ं । बिबिए सञ्चालन गर्दा दे खिएको उत्साहले आगामी वर्षमै व्यवस्थापन तर्फकै बिआइएम, मानबिकीतर्फको े बिसिए वा बिज्ञानतर्फको बिएस् सी सिएसआइटी मध्ये कुनै एक कार्यक्रम सञ्चालन गनेर् भन्ने निष्कर्षमा पुगे का छांै  ।
ने तृत्व तपाइले सम्हाल्नुभएको छ, क्याम्पसले मुहार फे र्ला ?
म क्याम्पसमा उपप्राध्यापकमै रह“दा पनि एक व्यक्तिले घर भाडा लिएर त्रिबिका बिबिए, बिसिए बिएससी सीएसआइटी जस् ता कार्यक्रम चलाउन सक्ने तर त्रिबिकै यति ठूलो आंगिक क्याम्पसले त्यस् ता कार्यक्रम चलाउन किन नसक्ने भन्ने कुरा र क्याम्पसले भौ तिक पूर्वाधार निर्माणमा बजे ट पाएर पनि किन खर्च गर्न सकिरहे को छै न भन्ने कुराको खो जीमा थिए । गत वर्ष म सहायक क्याम्पस प्रमुख भएदे खि क्याम्पस प्रमुख र क्याम्पस प्रशासनसग मिले र यी दुबै कुराको उत्तर खो ज्ने हो इन दिने प्रयासमा लागे ं । तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख विमल सुवे दी, सहायक क्याम्पस प्रमुख सुधीर पो ख्रे ल तथा अग्रज प्राध्यापकहरुको सल्लाहमा एक वर्षभित्र कमर्श भवनमा तला थप गरी बिबिए कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने निस् कर्षका साथ अघि बढियो  । पछि आउनुभएका सहायक क्याम्पस प्रमुख निश्चल हमाल, प्रा.डा. अर्जुन बुढाथोकीलगायत हामी सबै मिले र अग्रजहरुकै सल्लाहमा बिबिए कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सफल भएका छौ ं ।
यति मात्रै ले पनि क्याम्पसमा रौ नक थपिएको छ । आफूले ने तृत्व गनेर् अवसर पाएको बे ला मे रो समयमा यो भएको थियो भने र गर्व गर्नलायक काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अवश्य लाग्दो रहे छ । यसका लागि ने तृत्वमा लक्ष, भिजन, मिसन तथा काम गनेर् व्यवस् थापकीय दक्षताका साथै टिम परिचालन गर्न सक्ने क्षमता सबै चाहि“दो रहे छ । म ने तृत्वमा रहे र काम गनेर् आजसम्म मात्र हो कि भो लिसम्म मात्र हो भन्ने हु“दा ह“ुदै पनि बिते को साढे चार महिनामा धे रै काम गर्न सकिएको महसुस भएको छ । एक सय २० बढी शिक्षक कर्मचारी र एक हजार पा“च सय बढी विद्यार्थी भएको संस् था सञ्चालन ज्यादै चुनौ तीपूर्ण कार्य हो  । यही बिबिए कार्यक्रम सञ्चालन गनेर् बहानामा हामीले क्याम्पसको भौ तिक पूर्वाधार विकासका लागि के न्द्रबाट आएर क्याम्पसको खातामा रहे को ४५ लाख बजे टमा क्याम्पसको आन्तरिक आयसमे त थपे र कमर्श भवनमा तला थप गर्न सफल भएका छौ ं ।
यस्तै त्रिविअन्तर्गतका उच्च शिक्षा परियो जना तथा घो राही उपमहानगरपालिकालगायतका सहयो गी निकायको सहयो गमा ३५ लाख बढी बजे ट प्राप्त गरी क्याम्पसमा बिबिए कम्प्यूटर ल्याब निर्माण गनेर् लगायतका अन्य भौ तिक पूर्वाधारका काम समे त सम्पन्न गनेर् चरणमा पुगे का छौ ं । विश्वविद्यालय अनुदान आयो गको सहयो गमा दुई करो ड बजे ट आउने बित्तिकै नया“ भवन निर्माण गरी जीर्ण बन्दै गएको मानविकी भवन भत्काएर क्याम्पसको मुहार नै फे नेर् यो जनासहित काम भइरहे को छ । हामी टिम स् िपरिटका साथ लागिरहे का छांै  । अहिले को राजनीतिक ने तृत्वले पनि हामीलाई के ही गर्न भनिरहनुभएको छ भने मलगायत प्रशासनिक जिम्मे बारीमा रहे का साथीहरु र अब आउने क्याम्पस प्रमुखलाई लक्ष भिजन र मिसनसहित काम गर्नुपनेर् अवस् था छ । टिम स् िपरिटमा काम गर्दा र गरांै भने र लाग्दा के ही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण विगत एक वर्षले दिएको छ । त्यसका लागि अब आउने ने तृत्व क्याम्पस प्रमुख हुनका लागि मात्र हो इन के ही गर्नका लागि आएको छु भन्ने भावनाले यो जनासहित आउन जरुरी छ ।
डिउटीमै ठगी गर्ने कर्मचारी, हे ल्मे ट टिचर बो के र क्याम्पसको विकास सम्भव छ ?
यस क्याम्पसका शिक्षक कर्मचारी कामचो र छन् भन्ने आरो पलाई चिदैर् हामीले हाम्रो क्याम्पसमा आजभन्दा चार वर्ष पहिले दे खि विद्युतीय हाजिरी सञ्चालनमा ल्याएका छौ ं । यसले शिक्षक कर्मचारीलाई धे रै हदसम्म अनुशासनमा ल्याएको छ । क्याम्पस प्रशासनलाई खबरदारी गनेर् एक हजार पाच सय बढी विद्यार्थी छन् । विद्यार्थीहरुका संघसंगठनहरु छन् । पत्रकार, नागरिक समाज तथा विद्यँर्थीहरुका अभिभावकहरु हुनुहुन्छ । त्यसमाथि त्रिबि के न्द्रीय कार्यालय अनुगमन महाशाखा छ । अख्तियार दुरुपयो ग अनुसन्धान आयो ग, राष्ट्रिय सतर्कता के न्द्रलगायतका धे रै संघसंस् था छन् । जनप्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ । क्याम्पससग सरो कार राख्ने धे रै सरो कारवाला हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षक, कर्मचारीले डिउटी पूरा गदैर् नन् भन्न नमिल्ला ।
त्यसमाथि प्राध्यापन पे शा सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र पनेर् कुरा र स्वयं जिम्मे वारीबो ध गनेर् कुरा हो  । यति हुदाह“ुदै पनि हामी सबै मा के ही गतल प्रबृत्तिहरु पनि छन् । जसको नुन खाएका छौ ं त्यसै प्रति अनुत्तरदायी बन्ने र नकारात्मक सो च राखे र समयमा ठगी गनेर् प्रबृत्ति छदै छै न भन्न मिल्दै न । तर यो आमप्रबृत्ति नभइ के ही हदसम्म भएकै कुरा हो  । त्यसलाई सबै को खबरदारी र निगरानी जरुरी छ । त्यस प्र्रबृत्ति सग हरे स नखाई त्यस् तो गनेर् हरुलाई हरे स खुवाएर अघि बढ्नुपर्छ  ।
क्याम्पसको जग्गा संरक्षणमा हरे स खाएकै जस्तो देखियो नि ?
लमही नगरपालिकाको सो नपुरमा ३५ बिगाह र सतबरियामा ४५ बिघा गरी ८० बिगाह जग्गा क्याम्पसको नाममा भएको अभिले ख देखिन्छ । यी दुबै जग्गा अतिक्रमण भएको अवस् थामा छन् । सो नपुरमा भएको जग्गा सुकुम्बासी र बाढी पीडितका नाममा द्वन्द्वकालमा अतिक्रमणमा परे को हो भने सतबरियामा रहे को जग्गा राप्तीको बगर हो  । यी दुबै ठाउको जग्गाबाट क्याम्पसले लाभ लिन सके को छै न् । सबै को चासो र खबरदारी बढे पछि हामीले लमही नगरपालिकालाई पत्राचार गरी यी दुबै ठाउको जग्गाको अवस् था र अतिक्रमण गरी बसे कासग समन्वय गरी जग्गालाई क्याम्पसले उपयो ग गर्न पाउने वातावरण सिर्जनाका लागि पहल गर्न आग्रह गरे का छौ ं । लमही नगरपालिकाले त्यो बातावरण मिलाउने प्रयास गरिरहे को छ । यसमा क्याम्पसको प्रगति चाहने सबै को सहयो ग आवश्यक छ ।
क्याम्पस प्रमुख कहिले सम्म आउनुहुन्छ ?
एक क्याम्पस प्रमुखको कार्यकाल सकिएपछि अकोर् क्याम्पस प्रमुखको व्यवस् था गनेर् काम त्रिबि कार्यकारी परिषदको हो  । निवर्तमान क्याम्पस प्रमुख विमल सुवे दी सरको कार्यकाल २०७५ जे ठ २३ बाट सकिएको हो  । २०७५ साउन ४ दे खि आर्थिक अधिकारसहित मलाई क्याम्पस प्रमुखको समे त कामकाज गनेर् गरी अकोर् व्यवस् था नभएसम्मका लागि जिम्मे वारी दिइएको छ । क्याम्पस प्रमुख कहिले आउनु हुन्छ म भन्न सक्दिन । तर छिटै आउनुपर्छ ।
निमित्त नै प्रमुख हुने त हो इन ?
त्रिवि कार्यकारी परिषदले अकोर् व्यवस्था नगर्दासम्म त्यस्तै हो भन्दा हुन्छ । निमित्तको अवधि नतो किएको र अकोर् कहिले आउने भन्ने निश्चित नहुदासम्म निमित्त नै प्रमुख हुन्छ । ने पाल संस्कृत बिश्वविद्यालयका धे रै क्याम्पस अहिले यसरी नै चले का छन् ।
अन्त्यमा भन्नै पनेर् के ही छुट्यो कि ?
आफू जिम्मे वारीमा रहदा के ही गरु भन्ने अवश्य लाग्दो रहे छ । मे रा लागि यति ठूलो संस् थाको प्रमुखको जिम्मे बारी सम्हाल्न
पाउनु अवसरकै कुरा हो  । म यो अवसरलाई भरपुर उपयो ग गदैर् उदाहरणकै रुपमा काम गर्न चाहन्छु । मलाई क्याम्पस परिवारलगायत सबै सरो कारवालाहरुबाट आ–आफ्नो क्षे त्रबाट गर्न सक्ने हर प्रकारको विशे ष सहयो ग चाहिएको छ । सबै को सहयो गबाट यस क्याम्पसलाई उत्कृष्ट शै क्षिक के न्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
सडक विस्तार नै पहिलो प्राथमिकताः वडाध्यक्ष बुढा २०७५ मंसिर २०, बिहीबार १८:१७
सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय शिक्षा पुु¥याउने अभियानमा छौं २०७५ मंसिर २०, बिहीबार १८:१७
सहकारी समृद्धिको आधार हो २०७५ मंसिर २०, बिहीबार १८:१७